कोपा अमेरिका जितेका मेसीले अब जित्न बाँकी के छ ? - नागरिक रैबार
कोपा अमेरिका जितेका मेसीले अब जित्न बाँकी के छ ?
लियोनल मेसी र बार्सिलोनाबीच नयाँ सम्झौताको सहमति बनिसकेको छ र कागजमा औपचारिक हस्ताक्षर भएर घोषणा हुनमात्रै बाँकी छ । भर्खरै कोपा अमेरिका च्याम्पियन बनेका मेसीले ५ वर्षका लागि बार्सिलोनासँग सम्झौता गर्न लागेका हुन् । मेसीले अब जित्न के बाँकी छ ? यसबारे चर्चा गरौं :
विश्वकप र च्याम्पियन्स लिग
मेसीले जित्न बाँकी प्रमुख उपाधि नै विश्वकप हो । अर्जेन्टिनाले उनको कप्तानीमा भर्खरै कोपा अमेरिका जित्यो । तर, समर्थकहरु विश्वका सर्वोत्कृष्ट खेलाडीले विश्वको सबैभन्दा ठूलो प्रतियोगिता जितुन् भनेर कामना गर्दैछन् । यसका साथै बार्सिलोनाले २०१४–१५ को सिजनपछि च्याम्पियन्स लिग जितेको छैन । जबकी, उसको प्रतिस्पर्धी रियल म्याड्रिडले त्यस सिजनपछि लगातार तीनपल्ट च्याम्पियनस लिग जित्यो । अहिलेसम्म चारपटक च्याम्पियन्स लिग जितिसकेका मेसीको नजर पाँचौ उपाधिमा छ ।
बार्सिलोनाबाट लामो अवधि खेल्ने खेलाडी
बार्सिलोनाका लागि यो सिजन मेसीको १८ औं सिजन हुनेछ । च्याम्पियन्स लिगमा सर्वाधिक १ सय ५१ खेल खेल्ने जाभीको किर्तिमानबाट मेसी केवल दुई खेलले टाढा छन् ।
सबैभन्दा धेरै उपाधि
आफ्नो करियर टुंग्याउनुअघि मेसी आफ्ना मिल्ने साथी डेनी अल्भासको किर्तिमान पनि तोड्न चाहन्छन् । ३८ वर्षीय ब्राजिली खेलाडी अल्भासले खेल जीवनमा कुल ४४ उपाधि जितेका छन् । ३४ वर्षका मेसीले अहिलेसम्म ३८ उपाधि जितेका छन् । यी दुबै खेलाडी अहिले सक्रिय खेल जीवनमा छन् । बार्सिलोनाका पूर्व स्टार अल्भास अहिले ब्राजिली क्लब साओ पावलोबाट खेल्छन् ।
यदी अहिलेकै रफ्तरमा गोल गरिरहे भने उनले चाडैं पाँच सय लिग गोलको किर्तिमान छुनेछन् । यसका लागि उनी २७ गोलले पछि छन् । सबैखाले प्रतियोगिताको हिसाब गर्ने हो भने मेसी ८ सय गोलको कितिर्तमान छुनबाट ३३ खेलले पछि छन् ।
मेसीसँग आफ्नो करियरका दौरान क्रिष्ट्रियानो रोनाल्डोमात्रै नजिकको प्रतिस्पर्धामा देखिए । रोनाल्डोले ५ र मेसीले ६ पटक बेलोन डि अर जितेका छन् । क्लब तथा देशका लागि महत्वपूर्ण उपाधि जिताउन नसकेका कारण रोनाल्डोले यस सिजन बेलोन डि अर जित्ने संभावना कम छ । तर, मेसीले कोपा अमेरिका जितेकाले यस सिजन सातौं अवार्ड जित्नसक्छन् ।
च्याम्पियन्स लिगमा रोनाल्डोले १ सय ३५ र मेसीले १ सय २० गोल गरेका छन्, यो अन्तर कम गर्न मेसीलाई मुस्किल छ ।
प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने माओवादी केन्द्रको निर्णय